About Us - Foshan nguHermes Steel Co., Ltd
Ngenxa premier insimbi umgangatho umyili eTshayina, Foshan Hermes (Hengmei) Steel Co., Ltd yasekwa ngo-2006, nto leyo uzama kwiinguqulelo steel stainless kunye nomgangatho iminyaka engaphezu kwama-10. Ukuza kuthi ga ngoku, siye yaba inkampani enkulu ehlanganisiweyo yoyilo steel stainless kaThixo, processing.
Ngoku Hermes (Hengmei) Steel ukuba waziwa kakuhle ezininzi kumazwe.
India: Saqala unikezelo emarikeni India ukususela kwiminyaka 2010. Ngoku senza ukuba igama elihle e Mumbai, Chennai kunye Delhi, ezininzi abathengi bakhetha nguHermes esemgangathweni.
Middle East: Nge imigudu yethu oqeqeshiweyo iqela yokuthengisa, ngoku yokuqokelela abathengi ngakumbi nangakumbi. Bonke abathengi esele waba ngumhlobo nguHermes Steel.
Supply ukuya ezininzi iiprojekthi kunye mveliso ifanitshala, iprojekthi e Airport, Metro kunye Isakhiwo Architecture, Stainless stockholder ophuma eMzantsi Korea, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Philippines.
OKO kwenza ntoni ngoku?
Ukwenzela ukuhlangabezana ezininzi nabathengi imfuno kunye nesicelo, ngoku sizinikela wamasimi onke apho kusetyenziswa insimbi, mosaic steel stainless, iimveliso intsimbi engatyiwa & awokuvelisa, kuquka ipatishini, trims, izahlulo ikheshi, Sibona, njl
- With kwiminyaka engaphezu kwama-10 amava kwezi nkalo, siye iqela amazwe leengcali & nabanamandla.
- umthamo yethu ngenyanga kwentengiso ifikelela ngaphezu kweetoni kwe 10000, kwaye iimveliso zethu ithandwa kakhulu apha ekhaya nakumazwe angaphesheya, ezifana kuMbindi Mpuma, mpuma Asia kunye Afrika, njl njl
- Nge izixhobo phambili kunye nobuchwepheshe entsha, sasisaziwa kakuhle njengequmrhu ongumzekelo ngenxa obubalaseleyo umgangatho esemgangathweni.
- inkqubo yolawulo lomgangatho ezizalisiweyo, emva-ukuthengiswa inkxaso & inkonzo.
- ebuza Elungiselelweyo usoloko elamkela! Iisampuli FREE zingathunyelwa ngokwesicelo!
Abakhi kunayo kunye nabayili kulo lonke ihlabathi ukhethe uHermes Steel njengoko liqabane elifanelekileyo ukulungiselela iiprojekthi zabo! Qhagamshelana nathi, sibe nekamva eliqaqambileyo yeyethu!